Filter series FAQ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Fa maninona no ilaina ny sivan-drano fanondrahana?
Zava-dehibe ho an'ny rafitra fanondrahana rano ny sivana amin'ny rano. ... Na dia afaka mamakivaky ny rafitrao aza ny sombin-fasika madinidinika nefa tsy manentsina azy, dia miteraka fihenan-tseranana amin'ny fitaovana. Ny valves mandeha ho azy dia misy lalan-drano kely dia kely ao amin'izy ireo izay mety hanjary plugging ka tsy afaka misokatra na manidy
Iza no tsara kokoa sivana kapila na sivana amin'ny efijery?
Indraindray ny kalitaon'ny filtration dia omena mitovy volovolo haben'ny fampitahana sivana amin'ny efijery. Tombony iray fa ny sivana kapila manana ny haino aman-jery sivana dia ny ahafahany mihemotra haingana kokoa amin'ny rano tsy misy rano. Sivan-tsolika ampiasaina amin'ny fanondrahana fambolena dia rakotry ny fenitra ISO 9912-2.
Ahoana ny fanadiovana ny sivana?
Esory ny sivana amin'ny mpampitohy. Diovy ny sivana fanondrahana amin'ny famafana ny tahiry ao amin'ilay sivana. Ataovy ao anaty kaontenera kely misy rano madio ny sivana mba hamaha sy hanaisotra izay maloto rehetra
Iza ny sivana harato azo safidiana ho an'ny rafitra fanondrahana?
Raha ny fitsipika ankapobeny dia manome soso-kevitra 60-70 harato aho ho an'ny lohan-tsifotra sy sivana 100-harato aorian'ny valves ho an'ny fanondrahana mitete. Ny vola fanampiny laniana amin'ny rafitra fanivanana kalitao tsara dia handoavana ny làlana miaraka amin'ny fihenan'ny fikolokoloana sy ny fanoloana ampahany kely kokoa.